मासिक राशिफल: चैत्र महिना | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
मेष राशी (नामकाे शुरुकाे अक्षर चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): महिना संघर्षदायी रहनेछ । खर्चमा वृद्धि हुन सक्नेछ । शत्रु पक्ष सबल रहनेछन् । हाड नसामा समस्या देखिन सक्छ । अध्यनको क्षेत्र सबल र सफल रहनेछ । नयाँ कार्यप्राप्तिको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय मध्यम लाभदायी रहनेछन् । वाणिज्य क्षेत्रमा विशेष उन्नति हुने देखिन्छ । आमदानीका स्रोत बढ्ने छन् । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । भगवतीको उपासनाका साथै राता वस्तुको प्रयोग शुभ रहने देखिन्छ ।
बृष राशी(नामकाे शुरुकाे अक्षर इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो): महिना लाभदायी रहनेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा भने कडा मिहिनेत र परिश्रमको जरुरत पर्ने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ । कार्योन्नतिको योग पनि देखिन्छ । पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । काम बन्नुका साथै मित्र सुख मिल्नेछ । कृषि कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ । आमदानीका स्रोत निरन्तर बढ्ने देखिन्छन् ।
मिथुन राशी ( नामकाे शुरुकाे अक्षरका, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह): महिना उन्नतिकारक रहनेछ । कर्म प्राप्त्किा योग देखिन्छन् । पराक्रम बढ्नुका साथै कार्यमा उन्नति हुने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट उन्नति हुने देखिन्छ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा पििन रुचि जाग्ने छ । प्रेम जीवन सफल र सुखद् रहनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । आफन्तजनको साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । नयाँ कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउने देखिन्छ ।
कर्कट राशी ( नामकाे शुरुकाे अक्षरहि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो): महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ । कार्यमा उन्नति हुनेछ । सामाजिक पद प्रातिष्ठा प्राप्त हुनुका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा विशेष अभिरुचि रहनेछ । सामाजिक कार्यम मन जानेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्र भने निर्वल देखिन्छ । जलीय पदार्थबाट सजग रहनु नै उत्तम हुनेछ । मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । विद्या अर्थकरी रहनेछ । भू–धनबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ । प्रेम जीवन सबल र सुखद् रहने देखिन्छ ।
सिंह राशी ( नामकाे शुरुकाे अक्षर मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): महिना कार्यदायी रहनेछ । भूधनबाट लाभ हुनेछ । प्राविधिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै उन्नति प्रगति हुने पनि देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र उन्नतिकारक देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ रहनेछ । बौद्धिक उन्नयनका कार्यमा लगाव रहने देखिन्छ । मित्र जनको सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि जाग्नेछ । कुरा कबाट्नेको संख्या बढ्नुका साथै महिनाको उत्तराद्र्धकबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहनसक्ने देखिन्छ ।
कन्या राशी (नामकाे शुरुकाे अक्षर टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) : यात्रादायी रहनेछ । व्यवसायमा व्यस्तता बढ्ने छ । आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्ने देखिन्छ । धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिका परिसूचकहरू देखा पर्नेछन् । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलदायी रहनेछ । धार्मिक सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि रहनेछ । सखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । कीर्ति वृद्धिका साथै पदोन्नतिका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूलता रहन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउनु नै उचित हुनेछ ।
तुला राशी (नामकाे शुरुकाे अक्षर र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) : उन्नतिकारक रहनेछ । आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन् । पराक्रम ब्नुकका साथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने छ । यात्राका विशेष योग देखिन्छन् । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । कलाका क्षेत्रमा विशेष रुचि जाग्नेछ । भू–धनबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ । विद्या लाभदायी रहनेछ । शत्रु पराजित हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । सोचेका काम बन्नुका साथै नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ । शत्रु सबल रहनेछन् । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ ।
बृश्चिक राशीकाे लागि (नामकाे शुरुकाे अक्षर तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आफन्तजनबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम रहनेछ । यात्राका विशेष योग देखिन्छन् । व्यवसायमा उन्नति हुनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै धार्मिक सामाजिक कार्यमा अभिरुचि जाग्नेछ । शत्रु पक्ष भने सबल रहेछन् । स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
धनु राशी(नामकाे शुरुकाे अक्षर ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) : महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । कार्यमा उन्नति हुनेछ । सोचेका काम बन्नेछन् । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ । श्रीवृद्धिका साथै कार्य प्राप्तिको योग पनि देखिन्छ । मित्रजनबाट सुख मिल्नेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । स्वास्थ्यमा सजगता अपनाउनु नै उचित हुनेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै कर्मप्राप्तिको योग पनि देखिन्छ । स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूलता रहनेछ । चिसा वस्तु हानिकारक रहन सक्ने देखिन्छ ।
मकर राशी ( नामकाे शुरुकाे अक्षर भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि): महिना फलदायी रहनेछ । कर्मप्राप्तिको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक लाभका योग पनि देखिन्छन् । बोलीको विशेष प्रभाब बढ्नेछ । मित्र जनबाट साथ सहयोग मिल्नुका साथै कीर्ति वृद्धिको योग पनि देखिन्छ । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राको योग पनि देखिन्छ । आफन्त एवं परिवारजनबाट पनि विशेष लाभ हुने छ । शत्रु पराजित हुने छन् । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ ।
कुम्भ राशी (नामकाे शुरुकाे अक्षर गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द): महिना सफल रहनेछ । कर्म प्राप्तिको योग देखिन्छ । भू–धन लाभदायी रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । मित्रजनबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यमछ । व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथै आर्थिक वृद्धि हुनेछ । राजनीतिक कार्यमका विशेष रुचि जाग्ने छ । विद्याबाट लाभ देखिन्छ । धनको क्षेत्रमा भने अपचलन भइरहनेछ । कार्यमा केही कठिनाई पर्न सक्ने छ । शत्रु पक्ष सबल रहने छन् । अन्य क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ ।
मीन राशी (नामकाे शुरुकाे अक्षर दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि): महिना लाभदायी रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् । कार्यमा उन्नति हुने देखिन्छ । सामाजिक मान सम्मान मिल्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोग मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ । पारिवारिक सुखका साथै व्यापार व्यवसायबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ । शत्रु पक्ष निर्वल रहनेछन् । कर्मप्राप्तिको योग छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष सजग रहनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
झापा । झापा गोरुले हानेर एकको मृत्यु भएको छ । चरनमा लगाइएपछि घरतर्फ ल्याउँदै आफ्नै घरमा पालेको गोरुले हानेर…
पौष १७ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जनवरी ०१ तारिख,आजको चाडपर्व र उत्सव : सफला एकादशी व्रत, अंग्रजी…
मेयरले गुन्यु -चोली उपहार दिएपछि ज्योति मगरकाे अायाे यस्ताे प्रतिक्रिया
जुम्ला । गायिका ज्योति मगरलाई जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले गुन्यु चोली उपहार दिएको छ।
चन्दननाथमा सञ्चालित प्रादेशिक औधागिक व्यापार मेलामा छोटाछोटा…
नायिका साम्राज्ञीको इन्स्टाग्राम ह्याक
काठमाडाैं । चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्लक्ष्मी शाह सामाजिक संजाल इन्टाग्राममा एकदमै लोकप्रिय छिन् ।
उनलाई इन्टामा करिब ४…
काठमाडौं । प्रहरीले विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बैंक ठगीमा कर्मचारी नै संलग्न, एटिएक बुथमा कमजोर प्रविधि, सिभिल बैंकका कर्मचारी रंगेहात भेटिए !
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरले बैंक खातामा बचत रहेको पैसा अनधिकृत रुपमा निकाल्ने…
नेपाली सेनाका जर्नेल, कर्नेलका घरघरबाट ‘अर्दली’हरु फिर्ता गर्न निर्देशन 201 views